Xildhibaan Kolombo oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle oo ka digay Xiisadda Balcad – Kalfadhi
BALCAD, 05 FEB 2019 (KALFADHI)-Xildhibaan Maxamed Axmed Kolombo oo katirsan Golaha Wakiilada ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa walaac ka muujiyay xaaladda kasoo korartay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe xiisadaas oo u dhaxaysa maamulka degmada. Kolambo oo sidoo kale ah Wasiir-u-dowlaha Warfaafinta ee Hirshabeelle ayaa sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay ka sii daraysay xiisadda u dhaxaysa maamulka oo ay dad ku dhintayn kuwa kalane ay ku dhaawacmayn.
“Waxaan ka yeelanay shir gaar ah xiisadda kasoo korartay Balcad oo u dhaxaysa xubnaha maamulka, waxaan ku baaqnay in la dejiyo xaaladda” ayuu yir Xildhibaan Kolombo oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle. “Waxaa ku baxay mas’uuliyiin DFS iyo Hirshabeelle si arintaasi loo xaliyo, waxaana rajo wanaagsan ka qabnaa in dhowaan la soo afjaro” ayuu yiri Kolombo.
Wasiir-u-dowlaha Warfaafinta Hirshabeelle Maxamed Axmed Kolombo ayaa sheegay in Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi ay kawar qabaan xiisadda ka taagan Balcad, waxa uu sheegay in Madaxda Hirshabeelle ay ku howlan yihiin sidii arintaas loo xalin lahaa wafdina ay u dirayn sida uu sheegay Wasiirka.
“Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka waa la socdaan xaaladda Balcad, waxaa loo diray wafdi xaliya waana lala hadlay maamulka degmada”, ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Axmed Kolombo.
Degmada Balcad ee Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa laba jeer waxaa ku dagaalamay Ciidamo kala taabacsan maamulka degmada, dagaalka ka dhacay degmada Xiisadii ka dhalatay ayaa ilaa hada waxay ka taagan qayba ka mid ah Balcad. Waxaa jira baaqyo isa soo tarayo oo ka soo baxay Waxgaradka degmada Balcad.
Xildhibaan Fiqi "Hey'adda NISA Hangashtii u Ekaa"